सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको टिप्पणी ! | Ratopati
सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको टिप्पणी !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी सर्वोच्चले गरेको फैसला अनपेक्षित र राजनीतिक प्रकृतिको भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार साँझ नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपाका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलबाट उक्त निकर्ष निकालेको हुन् ।
उनले भने, ‘आजको सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुन व्यवसायी र विज्ञ साथीहरुसँग छलफल ग¥यौँ । यो आजको फैसला अनपेक्षित जस्तो र बढी राजनीतिक प्रकृतिको फैसला लागेको छ भन्ने सुझावहरु आएको छ । थुप्रै कोणहरूबाट कानुन व्यवसायीहरुले राख्नुभएको छ आफ्नो धारणा । त्यसको आधारमा भोलि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौ । यो अपेक्षित थिएन यस्तो फैसला, अनपेक्षित नै हो यो । बढी राजनीतिक प्रकृतिको छ । तर समग्र फैसलाको अध्ययन गरेर, सबै साथीहरु सल्लाह गरेर मात्रै विस्तार पूर्वक आफ्नो धारणा भोलि सार्वजनिक गर्छौ ।’